Debian + KDE: Ntinye na nhazi | Site na Linux
Dị ka m kwere nkwa, lee usoro m ga-eme ozugbo m wụnyechara ihe KDE 4.6 na m hụrụ n'anya Nyocha Debian. Adịwo m ntakịrị ọrụ taa, biko gbaghara m ma ọ bụrụ na ọdịghị etu ị chọrọ.
Taa ụtụtụ m mere dị ọcha wụnye (si ọkọ) nke Debian, iji mee ka ederede nchịkọta nke m kwesịrị ịwụnye na ihe ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ị gbasoro isiokwu a site na nkwụsị, ị gaghị enwe ihe kpatara nsogbu ọ bụla.
1 Ntinye Debian.
3 Ntinye KDE
4 Agbakwunyere nchịkọta.
5 Na-ahazi KDE
6 Na-ewepụ mmetụta.
7 Na-egosipụta ngwa Gtk nke ọma
8 Iwepu usoro na mmalite.
9 Ikpochapu ihe na-agbanwe agbanwe.
10 Omuma tebụl.
Banyere nwụnye na e nwere a peculiarity. Ana m ejikarị Nyocha Debian na ihe ezi uche dị na ya bụ na M ebudatara iso nke njikọ a na nke ahụ i mechara nwụnye. Ihe bụ nsogbu bụ na ebe bandwidth m anaghị anabata ya, ekwesịrị m iji iso Debian piakota.
Nkwanye # 1: Ọ na-anwa ịwụnye ya na Debian Testing iso maka ihe abụọ:
Agaghị enwe nchịkọta iji melite.
Run naghị enwe ihe egwu ị ga-enweta njehie ịdabere ma ọ bụ ihe ndị dị ka.
Ntinye, ma obu iso de Afanyekwa o Wheezy, ọ bụ kpọmkwem otu m si akọwa ya na nke a pdf, ewezuga m awunye Egwuregwu Ejiji, ma ọ bụ naanị Systemrụ ọrụ sistemụ ọkọlọtọ. N'ihi na a ndu m na-aga iche na echichi e mere site iso nke Testing.
Ozugbo anyị mechara wụnye na-enweghị eserese na gburugburu ebe obibi, anyị na-abanye dị ka mgbọrọgwụ ma hazie ebe nchekwa:
na isi mmalite faịlụ anyị tinyere:
Mgbe emechara, anyị na-emelite nchịkọta ndị arụnyere:
Ozugbo usoro a gwụchara, ọ bụrụ na ihe niile emeela nke ọma, anyị ga-amaliteghachi PC ma anyi gara n'ihu iwunye KDE.
N'ime ntuziaka a, anyị ga-awụnye nchịkọta ndị dị mkpa ka ọ bụrụ KDE gosipụtara n'ụzọ ziri ezi ma nwee ike iji ya. Anyị ga-etinyekwa ngwugwu ụfọdụ dị mkpa nke anaghị etinye na ndabara. Ozugbo anyị banyere dị ka mgbọrọgwụ, anyị ga-arụ ọrụ zuru oke site na ịwụnye nchịkọta ndị a:
Site na nke a, ọ zuru ezu ka ọ bụrụ na ọ gwụchaa ma anyị malitegharịa, anyị nwere ike ịbanye na desktọọpụ ọhụrụ anyị. Ọ bụrụ na ị lee anya na njedebe m gbakwunyere LightDM na m na-akọwa ihe kpatara ya. Mgbe anyị wụnye ngwugwu kde-plasma-desktọọpụ, nke a na-etinye anyị KDM nke bụ nke m dị oke arọ, yabụ ana m edochi ya LightDM. Ozugbo anyị nyere Tinye, onye dibia afa ga aju anyi nke anyi choro iji, i hotara nke ichoro.
LightDM ọ ga-etinye nchịkọta maka sava eserese. Ebe ọ bụ na m na-eji intel, ana m agbakwunye: xserver-xorg-video-intel, ịbụ ụzọ:
Nke a zuru, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike iwunye ya ozugbo ọ gwụchara, ma ọ bụ yana ndị a, nchịkọta ndị a:
Ha bụ ngwugwu nke anyị ga-eji melite ngwa ahụ Gtk na anyị na-eji na ụfọdụ akara ngosi na anyị tinye. Ọ bụrụ n’ijighi akpa ego KDE jikwaa okwuntughe, ị nwere ike wepu kwalletmanager.
Tupu ịmalitegharịa, ọ ga-adị mma ịwụnye nchịkọta ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọrọ, dịka ọmụmaatụ:
Nchịkọta Njikọ Audio / Video
Ihe njiri metụtara ihe sistemu:
NO / KDE ngwa m ji:
Ihe m wepu:
N'ezie ịkwesịrị ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ihe ịchọrọ 😀
Ọ bụrụ na anyị gafere usoro ndị gara aga na-enweghị nsogbu, anyị ga-abịarịrị akụkụ kachasị mma nke ihe a niile: ịhazi KDE ịzọpụta anyị ole na ole Mb nke oriri. Mbụ anyị ga-eji aka anyị mee ya (site na njikwa) iji mechaa gaa na akụkụ ihe osise.
Agaghị m abanye nkọwa banyere ihe ọ bụ Akonadi o Nepomuk, karịsịa n'ihi na e nwere ọmarịcha isiokwu na-akọwa nke ọma ihe ọrụ nke onye ọ bụla n'ime ha bụ. I nwere ike ịgụ ya ebe a. Iji kwụsị Akonadi kpamkpam, anyị na-eme ihe ndị a:
anyị wee mee ya ka ọ bụrụ eziokwu:
Buru n'uche na ngwa dika Kmail ha na-eji Akonadi, yabụ na anyị enweghị ike iji ha. Iji gbanyụọ Nepomuk dezie faịlụ:
autostart = eziokwu
Anyị na-ahapụ ya dị ka nke a:
autostart = ụgha
Na tiori ihe niile a nwere ike ime site na Mmasị nke System, ma ọ dịghị ihe, gburugburu ebe a bụ ngwa ngwa 😀
Anyị nwere ike ịchekwa ntakịrị ihe onwunwe site na iwepu nsonaazụ (transferentsịn, ntụgharị) nke ahụ na-abata KDE na ndabara. Maka nke a anyị na-emeghe Njikwa Mmasị Sistem » Ọdịdị na omume nke ebe ọrụ »Mmetụta na Desktọpụ uncheck » Kwado nsonaazụ desktọọpụ.
Anyị nwekwara ike wepu mmetụta ndị ọzọ site na ịhazi oxygen-ntọala. Maka nke a, anyị pịa F2 dị elu anyị na-ede ntọala oxygen. Anyị kwesịrị inweta ihe dịka nke a:
N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịme onwe anyị obi ụtọ wepụ mmetụta nke ụdị dị iche iche. Naanị m na-achọpụta: Mee ihe ngosi.
Na-egosipụta ngwa Gtk nke ọma
Ihe mbụ anyị mere bụ ịwụnye motọ ahụ Gtk chọrọ:
Mgbe e mesịrị, anyị na-emeghe ọnụ na-etinye:
Ugbu a, naanị anyị ga - ahọrọ na Mmasị KDE karịa maka ngwa Gtk ojiji QtCurve. Enwere ike ịhụ nsonaazụ m Firefox:
Iwepu usoro na mmalite.
Anyị na-emeghe Njikwa Mmasị Sistem »Nchịkwa sistemụ» Mmalite na Mbepu »Onye njikwa ọrụ ma wepu aka na ndị anyị na-achọghị ịmalite. Ihe Nlereanya nke m na-gbanyụọ mgbe niile: Nepomuk modul ọchụchọ.
Ikpochapu ihe na-agbanwe agbanwe.
Agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, ntakịrị ntakịrị akara ngosi nke gosipụtara na cursor ahụ mgbe anyị mepere ngwa na-erepịa akụ. Iwepu ya anyị na-emeghe Njikwa Mmasị Sistem »Ọdịdị na omume ndị a na-ahụkarị» Ngwa na usoro ọkwa »ma ọkwa ngosi oleekwa ebe o kwuru Ihe na-agbanwe agbanwe anyị na-etinye: Enweghị ọrụ cursor.
Ọ na-amasị m mgbe niile ịnwe oche ọdịnala, dị ka ọ dị Gnome o KDE 3. Maka nke a, anyị ga-aga desktọọpụ wee pịa akara ngosi dị n'akụkụ aka nri elu wee họrọ Nchekwa ele mmasị:
Na windo nke na-apụta, anyị na-agbanwe ọdịdị ahụ Elele nchekwa.
Anyị na-etinye rcconf iji gbanyụọ ka ọ dị na mbụ ụfọdụ daemons na-amalite mgbe usoro akpụkpọ ụkwụ. Na nke m, otu n'ime ndị m na-ehichapụ bụ KDM ebe m na-eji LightDM. Kwesịrị ịkpachara anya karịsịa na nke a, ma ghara ihichapụ Ogbe.
Yabụ ntuziaka a. Enwere m olileanya na m nwere ike itinyekwu ihe ka oge na-aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Debian + KDE: Ntinye na nhazi
Daalụ nke ọma maka idebe okwu gị + 1
Echere m na ọ ga - enyere gị aka ...
Ekele, emeela m nhazi ahụ, anyị ga-amaliteghachi ịhụ ma ọ bụrụ na anyị na-eje ije ngwa ngwa, na kedu mmemme m nwere ike ịme na-enweghị n'oge mbido? Ọ bụrụ na anaghị m enye gị nsogbu nke ukwuu?
Nke ahụ dabere na ihe ị rụnyere. Ọ bụrụ n’igosi m nseta ihuenyo, enwere m ike inyere gị aka .. 😉
Ebe ọ na-ekwu ihe akonadi, ị na-etinye ya azụ, iji kwụsị akonadi ihe agbanwe agbanwe ga-abụ ụgha, dị ka nke a:
StartServer = ụgha
Eeh, ọ dakwara m mgbe m na-ede edemede ahụ, ana m ekele gị nke ukwuu 😀
elav Echere m na iwepu akonadi bu ngbanwe nke otu i si etinye ya na post.
Site n'iwepụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ, ma debe Akonadi na Nepomuk n'ọrụ, M belatara oriri site na 200Mb, enwere m afọ ojuju.
Mana RAM ole ka ị nwere? Reduce belatala oke oriri? Chei .. Akwa 😀
Enwere m 1.5Gb na 1.3Gb dị na AMD64 dual processor, nke m chere, ka m na-agụ na weebụ, na-erepịa RAM karịa i386. Achọrọ m ịgbalị iru 4Gb.
My kde abanyebeghị m n'ihi oke oriri nke Ram.
Ahụrụ m ya n'anya mana m nọ na Gnome Ja
Na Gnome2 ekwenyere m ma m gbalịrị Fedora 15 na Gnome3 ma ọ nwere nnukwu oriri nke RAM fọrọ nke nta ka ọ bụrụ KDE, enwere m olileanya na site na mmepe ọ na-eme ka oriri ahụ ka mma.
Ezigbo mma… .ja, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Debian nwụnye m nwere… ihe dị iche bụ na n'oge m wụnye ya na Squeeze na usoro ahụ dị egwu ...
Daalụ Roman77, anyị nwere obi ụtọ na ị masịrị ya 😀
Ndewo Elav. Agbanyeghị na anaghị m arụ ọrụ KDE, enwere m nkuzi a na-atọ ụtọ. Ọ na-amasị m ịmụ ihe. Daalụ nke ukwuu ma enwere m olileanya na ị ga-aga n'ihu na-ebipụta ọzọ.
Daalụ Carlos-Xfce, m na-atụ anya na ị ga-aga n'ihu na-ebipụta ndị ọzọ, m na-ekwu, ọ bụrụ na Gnome akpọghị m, ahụla m na nchịkọta Gnome3 na-abanye Ule 😀
Achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ. Ka anyị lee ma ngwụsị izu m na-agba m ume itinye ya. Banyere.
Ezigbo ozi, ugbu a amalitere m ịgbaso ya ... M ga-achọ ikpokọta kernel maka pc m mana amaghị m ihe modulu iji wụnye, enwere m Toshiba nke na-eji AMD Thurion Dual core na 4 GB nke RAM na nke a bụ mmepụta nke lspci:
00: 00.0 akwa akwa: Advanced Micro Devices [AMD] RS880 Bridge Bridge
00: 01.0 PCI akwa: Advanced Micro Devices [AMD] RS780 / RS880 PCI to PCI bridge (int gfx)
00: 11.0 SATA njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 SATA njikwa [AHCI mode]
00: 12.0 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB OHCI0 njikwa
00: 12.1 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 njikwa
00: 12.2 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB EHCI njikwa
00: 13.0 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB OHCI0 njikwa
00: 13.1 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 USB OHCI1 njikwa
00: 13.2 USB njikwa: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 USB EHCI njikwa
00: 14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus njikwa (rev 3c)
00: 14.2 Ngwaọrụ ọdịyo: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
00: 14.3 akwa ISA: ATI Technologies Inc SB7x0 / SB8x0 / SB9x0 LPC host njikwa
00: 14.4 akwa mmiri: ATI Technologies Inc SBx00 PCI na PCI Bridge
00: 18.0 akwa akwa: Advanced Micro Devices [AMD] Ezinụlọ 10h Processor HyperTransport nhazi
00: 18.1 Bridge host: Advanced Micro Devices [AMD] Ezinụlọ 10h Processor Map Maapụ
00: 18.2 Bridge host: Advanced Micro Devices [AMD] Ezinụlọ 10h Processor DRAM Controller
00: 18.3 Bridge host: Advanced Micro Devices [AMD] Ezinụlọ 10h Processor Miscellaneous Control
00: 18.4 Bridge host: Advanced Micro Devices [AMD] Ezinụlọ 10h Processor Link Control
01: 05.0 VGA njikwa kwekọrọ: ATI Technologies Inc M880G [Mobility Radeon HD 4200]
02: 00.0 Onye njikwa netwọkụ: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8191SEvB Wireless LAN Controller (rev 10)
03: 00.0 Ethernet njikwa: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E / RTL8102E PCI Express Fast Ethernet njikwa (rev 02)
Mkparịta ụka: Arch Linux na Debian